May 2019 – Myanmar Chin
LAITLANG ZATLANG NUN A HRAWKTU THIL TTHA LO KAN TUAHMI PHUN 6
May 31, 2019 Myanmar Chin 0
LAITLANG ZATLANG NUN A HRAWKTU THIL TTHA LO KAN TUAHMI PHUN6Laimi zatlang nun nuamnak vialteahrawktu thil hi phun ruk in ka […]
KHAMHNAK KONG BAIBAL HALNAK
KHAMHNAK KONG BAIBAL HALNAK Heb. 2: 14 zoh in hngakchia poh cu khamh an si kan zumh. Jesuh nihcun hrintthan na si lo ahcun Vancung […]
အမြန်လမ်းက ရဲကင်းတစ်ခုမှာ ရဲတပ်သားအသတ်ခံရ
May 29, 2019 Myanmar Chin 0
အမြန်လမ်းက ရဲကင်းတစ်ခုမှာ ရဲတပ်သားအသတ်ခံရ မေ – ၂၉ ၊၂၀၁၉ ရန်ကုန် – မန္တလေး အမြန်လမ်းက ရဲကင်းတစ်ခု မှာရဲတပ်သားတစ်ဦး အသတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒီကနေ့မနက် အစောပိုင်း ၃ နာရီဝန်းကျင်းလောက်က အမြန်လမ်း မိုင်တိုင် ၁၅၂ အနီးက ရဲကင်ှးာ တာဝန်ကျ တဲ့ […]
Malaysia မှာ မြန်မာမ နဲ့ နိပေါာ ကောင် မိတ်ကွာယ
သူများနိုင်ငံသားနဲ့ကြိက်လို့တဲ့ မြန်မာအမျိုးသားတစ်ယောက်က တားတယ် ပြည်တွင်းမှာအရင်လာတားကြည့်ပါအုန်းလား ပြည်မှာနေပီးအတွေးအခေါ်ခေါင်းပါးနေရင် ပြည်ပထွက်မနေပါနဲ့ သိက္ခာကျတယ် #Credit သူများနိုင်ငံသားနဲ့ကြိက်လို့တဲ့ မြန်မာအမျိုးသားတစ်ယောက်က တားတယ် ပြည်တွင်းမှာအရင်လာတားကြည့်ပါအုန်းလား ပြည်မှာနေပီးအတွေးအခေါ်ခေါင်းပါးနေရင် ပြည်ပထွက်မနေပါနဲ့ သိက္ခာကျတယ် #Credit Posted by ဖွဘုတ်တခွင်မှ သတင်းစုံ on Wednesday, May 29, 2019 […]
Breaking News:မန္တလေးက ဦးဝီရသူ ကျောင်းအား ရဲတပ်ဖွဲ့က ဝင်ရောက်ရှာဖွေ
မန္တလေးမြို့ မဟာအောင်မြေမြို့နယ် မစိုးရိမ်တိုက်သစ်အတွင်းရှိ ဆရာတော် ဦးဝီရသူ သီတင်းသုံးသည့် ဓမ္မသဟာယကျောင်းသို့ သံဃာ့နာယက ဆရာတော်များနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ က ဝင်ရောက်ရှာဖွေခဲ့ကြောင်း သိရသည် ။ “ရဲနဲ့ လာတယ်ဆိုမှတော့ လာဖမ်းတာပေါ့ ။ ဘာမှ လာရှာတယ်တွေဘာတွေ လုပ်မနေနဲ့ ။´´ ဟု အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားသူ ဦးကျော်မျိုးရွှေ […]
ဝါရင့် နောက်ခံလူ ဒေးဗစ် လူးဝဇ် နဲ့ ဝါရင့် တိုက်စစ်မှူး ဂွန်ဇာလို ဟီဂွာအင် တို့ အချင်းချင်း အချင်းများ ရန်ဖြစ်မှု ဖြစ်ပေါ် ခဲ့ပါတယ် ။
ဘာကူမြို့ မှ ပထမဆုံး လေ့ကျင့်ရေး အစီအစဉ် အပြီး လေ့ကျင့်ရေးကွင်း မှ ဒေါသတကြီး ထွက်ခွာ ခဲ့တဲ့ #ဆာရီ May 29, 2019 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 ချယ်လ်ဆီး အသင်း ဟာ မနေ့က အဇာဘိုင်ဂျန် နိုင်ငံ ၊ ဘာကူမြို့မှာ ယူရိုပါလိဂ် […]
BREAKING NEWS ဝရမ်း အတည်ပြုပြီးပါက ဦးဝီရသူကို ညတွင်းချင်း ဖမ်းရမည်ဟု ရဲတပ်ဖွဲ့ ပြော
May 28, 2019 Myanmar Chin 0
BREAKING NEWS ဝရမ်း အတည်ပြုပြီးပါက ဦးဝီရသူကို ညတွင်းချင်း ဖမ်းရမည်ဟု ရဲတပ်ဖွဲ့ ပြော ဧရာဝတီ၊ မေ ၂၈၊ ၂၀၁၉ အမျိုး ဘာသာသာသနာ စောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့ (မဘသ) ဆရာတော် ဦးဝီရသူကို ရန်ကုန်မြို့ ၊ အနောက်ပိုင်း ခရိုင် တရားရုံးမှ […]
Video: “ဝီရသူ ငါ့ရဲဘော်” ဟု သီတဂူဆရာတော် မိန့်ကြား
“ဝီရသူ ငါ့ရဲဘော်” ဟု သီတဂူဆရာတော် မိန့်ကြား ====================================== ရန်ကုန်၊ မေ ၂၈ တွဲဘက် ရွှေကျင်သာသနာပိုင် သီတဂူဆရာတော် ဒေါက်တာ အရှင် ဉာဏိသရက မန္တလေး၊ မစိုးရိမ်တိုက်သစ်မှ ဦးဝီရသူကို ငါ့ရဲဘော် ဟု မေလ ၂၇ ရက်နေ့ တွင် မိန့်ကြားသည်။ […]
ဆရာတော်ဦးဝီရသူနှင့်ပတ်သက်ပြီး ယခုအချိန်ထိ ဖမ်းဝရမ်းမရရှိသေးဟု ဒုတိယရဲချုပ် (၁) ပြောကြား
ဆရာတော်ဦးဝီရသူနှင့်ပတ်သက်ပြီး ယခုအချိန်ထိ ဖမ်းဝရမ်းမရရှိသေးဟု ဒုတိယရဲချုပ် (၁) ပြောကြား ————- —————- ————– ဆရာတော်ဦဝီရသူနှင့်ပတ်သက်ပြီးဖမ်းဆီးရန် ယခုအချိန် အထိ ဝရမ်းမရရှိသေးကြောင်း ဒုတိယရဲချုပ် (၁) ရဲဗိုလ်ချုပ် မျိုးဆွေဝင်းက ပြောကြားသည်။ မေလ ၂၇ရက်နေ့က နေပြည်တော်၌ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနတို့၏ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် […]
မန်ယူအသင်းရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ပစ်မှတ်ထဲက ကစားသမားများ ======================================= ဒီနှစ်မှာ ဖလားလက်မဲ့ရာသီအဖြစ် ကျရှုံးခဲ့တာကြောင့် မန်ယူအသင်းဟာ လာမယ့်ရာသီအတွက် အသင်းကို အားဖြည့်ဖို့ကြံစည်နေပါတယ်။ လက်ရှိ မန်ယူအသင်းရဲ့ပစ်မှတ်ထဲမှာ ထိပ်တန်းကစားသမားကောင်းများစွာရှိနေပါတယ်။ သူတို့ကတော့ – ၁။ ဂရေဇ့်မန်း (အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်) အက်သလက်တီကိုကနေ ထွက်ခွါတော့မယ်လို့ အတိအလင်းကြေငြာထားတဲ့ ဂရေဇ့်မန်းကို ဘာကာနဲ့အပြိုင် မန်ယူအသင်းကလည်း စိတ်ဝင်စားနေပါတယ်။ […]